Prototyping Concept Models | Concept Prototype - Gadziraproto - Gadziraproto Tech Co, Ltd.
KUSHANDISA / Hufakazi hweConcept
GadziraProto's assortment yeprototyping matekinoroji uye zvishandiso zvinobvumidza vatengi vedu kukurumidza kuwana prototyped pfungwa mamodheru panguva dzese dzenzvimbo dzekugadzira dhizaini yekutarisa kwekutarisa kwezvimiro, chimiro, mashandiro uye kutarisisa kwese uye kunzwa. Iwe unokwanisa kutaura zvakajeka ne dhizaini timu uye vatengi, tora yekutanga dhizaini mhinduro, uye uve nani mune ramangwana!
Pfungwa Dzinogoneswa neConcept Dhizaini Prototypes
Chii chinonzi Concept Dhizaini?
Concept dhizaini ndiyo danho rekusika rekugadzirwa kwechigadzirwa uko mainjiniya uye vagadziri vanofunga kufunga kwekutsvaira uye ese mikana ingangodaro. Ndiyo nhanho yekutanga yechigadzirwa chiri kusimukira uye iwo mweya wehunyanzvi, iyo yekutanga iterative maitiro mukutenderera, ichibatsira kutsvaga mhinduro dzakanakisa uye dhizaini yekugadzirisa.
Nei Chirevo Dhizaini Yakakosha Zvakadaro Kuti Uve Wokutanga Mukugadzirwa Kwekugadzira?
Icho chinofanirwa kuve chekutanga chinhu nekuti mhedzisiro yedhizaini dhizaini inopinda inotevera yakadzama dhizaini uye enjiniya maitiro. Iyo yakareba pfungwa yako yakamirira kurovererwa pasi, iyo inodhura zvakanyanya kukura kuchave. Muchokwadi, kubudirira kwechigadzirwa kunoenderana nekuwana iyo pfungwa chaiko pakutanga. Usatarisira pasi kukosha kwechiratidzo-che-pfungwa (POC) prototype uye enda kumberi usina kuzviratidza iwe nevamwe kuti pfungwa yako inogoneka.
Nei NeiPuroto Inotarisa Zvakanyanya paPrototyping Concept Dhizaini?
Yekukurumidza, yakachipa-yakachipa prototyped pfungwa mamodheru chishandiso chakakosha mukuendesa pfungwa kana mazano kune vaunoshanda navo, vatengi uye vashambadzi munzira iyo iyo 3D modhi mukombuta isingatombosvika.
Neine assortment yetekinoroji uye zvigadzirwa, GadziraProto inopa vatengi vedu mukana wakanaka wekukurumidza kuteedzera zvigadzirwa mukati meese matanho eiyo dhizaini yekuona kwekutarisa kwechitarisiko, chimiro, mashandiro uye kutarisisa uye kunzwa.
Usati waenderera pasi nenzira yekuvandudza iyo inogadzirwa vhezheni yechigadzirwa chako, unofanirwa kuve nezvakawanda zvemhinduro yako yakarovererwa pasi. Kunyangwe hazvo kuomarara kwechigadzirwa, chimwe chezvinhu zvekutanga izvo Gadziraproto inokuitira iwe kuratidza kuti zano rechigadzirwa rinogoneka kuti ribudirire.
Gadzira Yako Proof-of-Concept Prototype
Matanho Ekushandura Pfungwa Dzako kuva Chokwadi
Zvinodikanwa (Pfungwa) -> Concept Dhizaini -> CAD Modeling -> DFM Kuongorora -> Concept Prototype -> Dhizaini Kugadziridza
Paunenge wafunga zvigadzirwa zvinodiwa, usati watanga kudhizaina dhizaini, yako projekiti inozoenda kune iyo dhizaini dhizaini.
Iyo yakajeka dhizaini inogadzirwa ne3D uye yakasimba-modhi CAD zvirongwa, senge SolidWorks. Mhando dzeCAD dzakagadzirwa nezvezvinhu uye magungano kuti aongorore matambudziko anogona kunge asati agadzirwa.
Kana dhizaini ichishandiswa pakuongorora (DFM) ongororo, zvikamu nemagungano zvinozogadzirwa kuti zvionekwe zvakakodzera kugadzirwa kwekugona.
Yako tsananguro dhizaini ichavakwa uchishandisa 3D kudhinda kana imwe yekukurumidza prototyping maitiro. Panguva ino dhizaini yako ichatanga kutaridzika uye kunzwa kuita chaiko - zvinonakidza kwazvo!
Kuunganidzwa kwepakutanga pfungwa prototype idanho rakakosha mukuita kusimbisa zvakapfuura dhizaini fungidziro. Kuedzwa kwemuviri kunosimbisa kuti prototype inosangana nezvinodiwa zvekuita zvakamisikidzwa panguva yechikamu chepfungwa.
Kana shanduko dzichidikanwa, iwo maCAD mamodheru anozovandudzwa uye iwo mafungiro emhando anozoshandurwa kudzamara zvese zvinotarisirwa zvazadzikiswa.
GadziraProto Inopa dzakasiyana Nzira dzeRapid Prototyping Concept Models
Isu tinotenda dhizaini dhizaini yakakosha kugadzira chigadzirwa chikuru. Kugadzira pfungwa prototypes usati waenda muinjiniya dhizaini chikamu chakakosha sezvo ivo vachigona kufambisira mberi modelling dhizaini yechigadzirwa dhizaini uye kuwedzera hunyanzvi. Concept mamodheru anorarama kwenguva pfupi, asi akakosha mukuunza pfungwa dzako kuhupenyu.
Kuti usimudzire maitiro, unogona kuve nemisiyano yakati wandei yemifungo yekugadzirwa panguva imwe chete, ongorora sarudzo senge dhizaini, mashandiro uye maitiro ekugadzira, wobva wasarudza yakanakisa kubva padivi-ne-padivi kuenzanisa.
Yepamberi yekugadzira matekinoroji ehuchapupu hwepfungwa prototype iyo inoshandiswa zvakanyanya ndeye Stereolithography (SLA), Selective Laser Sintering (SLS) uye CNC Machining, ayo anowanzo sarudzwa kuti aongorore pfungwa mamodheru uye dhizaini.
Gadziraproto's inokurumidza prototyping masevhisi inogonesa dhizaini dhizaini kupfupisa kutenderera kubva kune yavo yechinyakare chigadzirwa dhizaini maitiro, kukurumidza chigadzirwa kushambadzira nekukurumidza.
Prototype yekupedzisa ichaita mutsauko weiyo yakabudirira pfungwa prototype. Yedu ine ruzivo rwekupedzisa timu inopa ruoko kupedzisa, primer, pendi-mechi pendi, magadzirirwo uye akapfava-kubata kupera. uye shandisa nzira dzinoverengeka dzekutengesa kuchengetedza iko iko kuungana uye kuratidzika kwakanakisa kwekuona.
Prototyping Chigadzirwa Dhizaina Concepts Inokupa Iwe Kugona ku
Gadzira uye natsiridza zvigadzirwa mazano uchichengetedza yakakosha nguva nemari.
Wana mhinduro inogoneka nekubata chaiko uye nekunzwa.
Gadzira dhizaini iterations yemahara nekuyera inoonekwa modhi.
Kunyatso nyatso ratidza mazano ako kune vaunoshanda navo, vatengi, uye hutungamiriri.
Wongorora mhinduro dzakanakisa dzekugadzira.
Tora musoro-kutanga pane zvekushambadzira zviitiko.
Kukurumidza Prototyping, Kurumidza Prototyping, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Cnc Rapid Prototyping, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Cnc Kuchengetedza,